Home Horyaalka Ingiriiska Arsenal oo ka shaqeyneysa lix heshiis oo xagaaga ah dhicidoona
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta iyo agaasimaha isboortiga Edu ayaa lagu soo waramayaa inay ka shaqeynayaan lix heshiis oo kala duwan ka hor suuqa kala iibsiga xagaaga.
Gunners ayaa la kulantay xilli ciyaareed niyad jab leh Premier League, iyagoo haatan fadhiya kaalinta 10aad ka dib markii laga badiyay 11 ka mid ah 26 kulan oo ay ciyaareen.
Sida laga soo xigtay football.london , ku guuldareysiga u tartamida boosaska Champions League waxay keeneysaa dadaalo horeyba loo bilaabay oo ku saabsan imaanshaha iyo bixitaanka.
Warbixinta ayaa sheegeysa in kooxda ka dhisan Waqooyiga London inay diyaar u tahay inay ku iibiso Alexandre Lacazette qiimaha saxda ah, halka Brighton & Hove Albion Tariq Lamptey loo arko bedelka mustaqbalka fog ee Hector Bellerin .
Sidoo kale wararka la isla dhexmarayo ayaa weli sheegaya in daafaca RB Leipzig Ibrahima Konate iyo weeraryahanka Celtic Odsonne Edouard ay labaduba ka muuqdaan raadaarka Arsenal.
Ugu dambeyntiina, Arteta iyo Edu waxay ku rajo weyn yihiin in iib loo helo Lucas Torreira , kaasoo ku dhibtooday inuu saameyn ku yeesho amaahda Atletico Madrid.
Previous articleManchester City ayaa bartilmaameedsaneysa seddex saxiix oo cusub xagaagan.
Next articleBarcelona oo soo saartay safka ay kaga hortegeyso Asosuna Kulanka Habeen dambe.